मन थकित र डराए जस्तो हुन्छ ? सुत्नभन्दा अगाडी तेजपत्ता प्रयोग गर्नुहोस्, चट् हुन्छ | सुदुरपश्चिम खबर
मन थकित र डराए जस्तो हुन्छ ? सुत्नभन्दा अगाडी तेजपत्ता प्रयोग गर्नुहोस्, चट् हुन्छ
तपाईलाई सबैलाई थाहा छ कि तेजपत्ता निश्चित रूपमा नेपाली घरका भान्छामा अवस्थित छ, तेजपत्ता मसलाको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यस बाहेक, तपाईले यो पनि जान्नुपर्दछ कि यो आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ । सुक्खा झारका पातहरूको प्रयोग खानालाई सुगन्धित बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तपाईले याद गर्नुभएको होला कुनै यस्ता खाना जो बनाउन जुन पाक्न लामो समय लाग्छ, त्यस्ता खानामा यसका पातहरू प्रयोग गरिन्छ।
एक पटक खाना तयार भएपछि, खाना पस्किनु भन्दा अघि तेजपात हटाइन्छ। तेज पातबाट आएको गन्ध यसको स्वादभन्दा बढी मिठो हुन्छ। यसको पातमा धेरै स्वास्थ्यकर लाभहरू हुन्छन्। प्राचीन कालदेखि नै यो कलेजो, आन्द्रा र मृगौलाको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ। धेरै चोटि यो माहुरीको टोकाइको चोटपटक लाग्ने ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ। आजकल धेरै मानिसहरूले यसलाई धेरै साना रोगहरूको रोकथामका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्।
त्यो मात्र होईन के तपाईंलाई थाहा छ कि तेजपत्ताकोपातले अझै बढी फाइदाहरू दिन्छ। हो, रसियामा हालसालै गरिएको सर्वेक्षण अनुसार यो पत्ता लागेको छ कि यसको पातलाई तनाव कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्पा इत्यादिमा आराम गर्न हामी कसरी अरोमा थेरेपी प्रयोग गर्छौं, तपाई पनि यसलाई घरको कोठामा प्रयोग गरी आनन्द प्राप्त गर्नसक्नुहुनेछ।
यस बाहेक, एउटा भाँडामा तेजपत्ता हाल्नुहोस् र त्यसलाई जलाउनुहोस् र अब कोठामा राख्नुहोस्। र यसलाई १५ मिनेटको लागि कोठालाई बाहिरबाट बन्द गर्नुहोस्। केही समय पछि जब तपाईले कोठा खोल्नुहुन्छ। कोठामा आरामको गन्ध मिल्नेछ। यदि तपाईं कोठामा केही समय बस्नुभयो भने, तपाईं ढुक्क र आरामदायी महसुस गर्नुहुनेछ।
तेजपत्ताको प्रयोग दबाई बनाउनको लागी पनि प्रयोग गरिन्छ । यसको प्रयोग सँधै आयुर्वेदमा हुने गर्दछ । कैयौँ प्रकारको बिमारीलाई तेजपत्ताले भगाउँदछ । यदि तपाई हरेक बिहान पानीको साथमा तेजपत्ताको पाउडर मिलाएर खानुहुन्छ भने यसले मधुमेह कहिल्यै हुन दिदैन ।यसलाई दिनमा ३ चोटी लिनुपर्दछ ।
तेजपत्ताले दिमागलाई तेज बनाउन मदत गर्छ । तपाई केही कुरा भुल्ने गर्नुहुन्छ या त तपाईलाई कुनै कुरा याद हुँदैन भने तेजपत्ता दिनहुँ खाने गर्नुहोस् । यो खाइराख्ने व्यक्तिलाई अल्जाइमर जस्तो रोग लाग्ने समस्या कम हुन्छ । बुढो उमेरमा पनि योृ खाएमा भुल्ने समस्या हुनेछैन । यस बाहेक तेजपत्ता महिलाको लागी बहुउपयोगी हुन्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 61 = 70